Wargeyska Der Spiegel ee ka soo dalka Jarmalka oo lagu sawiray Trump oo qoorta ka jaraya Xornimada – Xeernews24
4. Februar 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
February 4 (xeernews24)
Wargeyska caanka ah ee dalka Jarmalka ka soo baxa Der Spiegel ayaa eedeeyn ku timid kadib markii uu bogga hore ee wargeyska lagu soo sawiray Kartuun muujinaya Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo qoorta ka goynaya Taalada Xoriyada ee dalka Maraykanka.
Qaar kamid ah wargeysyada dalka Jarmalka ayaa eedeeyay wargeyska soo bandhigay kartuunkan, halka Madaxweyne ku xigeenka Baarlamaanka Yurub uu ku tilmaamay wax aan dhadhan lahayn.
Farshaxamiistaha sawirkan sameeyay Edel Rodriguez ayaa ku tilmaamay muuqaalkaas mid ka tarjumaya in dimuquraadiyadii qoorta laga jaray.
Xidhiidhka wadamada Jarmalka iyo Maraykanka ayaa sii xumaanayay tan iyo markii uu Madaxweyne Trump uu eedeeyay siyaasada hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel.
Trump ayaa sheegay bishii hore in siyaasada Merkel ee ahayd qaabilaada qaxooti badan oo yimid Jarmalka ay ahayd qalad weyn.
Sidoo kale Lataliyaha Trump ee dhinaca Ganacsiga ayaa ku eedeeyay dowlada Jarmalka inay faa’ido badan oo xaaraan ah uu ka heleyo lacagta Eeru-ga oo qiime dhac ku yimid.
Mr Rodriguez oo ah qaxooti siyaasadeed oo ka soo cararay dalka Cuba sanadkii 1980kii ayaa u sheegay wargeyska Washington Post in Trump iyo ururka IS ay yihiin kuwo isku mid ah oo labaduba ay yihiin Asal Raac.
Tifatiraha wargeyska Der Spiegel Klaus Brinkbaumer ayaa ku qoray wargeyska qeybta Tifatirka in Mr Trump Madaxweynaha Maraykanka uu isku dayayo in uu afgambi dhinaca sare ka bilaabo uuna doonayo inuu aasaaso “Dimuqraadiyad aan Xor ahayn,”
Wargeysyo badan oo caalamka ka soo baxa gaar ahaan wadamada reer Galbeedka ayaa waxbadan ka qoray Madaxweynaha cusub ee dalka Maraykanka Donald Trump siyaasadiisa, waxana uu Madaxweyne Trump ku eedeeyay saxaafada inaysan dhexdhexaad ahayn.
Dal-Dhaweehii Shalay iyo kan Maanta Maxay ku kala Duwaanan Karaan? GOBOLKA GAMBELLA EE ITOOBIYA oo ku soo biray Kacdoonka